बेलौरी वडा नम्बर ३ को मत गणना सम्पन्न,अध्यक्षमा काग्रेसका गिरी निर्वाचित
२०७४ असार १७ शनिबार
असार १७, सुदूर संञ्चार ।
बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को मत गणना सम्पन्न भएको छ । वडा अध्यक्षमा नेपाली काग्रेसका पुर्व प्रहरी निरिक्षक नेत्र गिरी निर्वाचित हुनु भएको छ । गिरीले ८२२ मत प्रप्त गदै वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । आफ्ना निकटतम प्रतिद्धद्धि नेकपा एमालेका सिता राम रिझाललाई ३५ मत अन्तरले पराजत गदै गिरी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । उहा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरिक्षकमा करिब ३० बर्षे सेवा गदै अवकाश हुनु भएका व्यक्ति हुन ।
एमालेका सिता राम रिझालको जम्मा ७८७ मत प्राप्त गर्नु भयो । वडा नम्बर ३ मा जम्मा २८७० मतदाता संख्या रहेकोमा जम्मा २०७२ मत खसेको थियो । यसरी सदस्यहरुमा खुल्ला सदस्यमा काग्रेसका क्रमश देवु थापाले ८११ मत, , जगन्नथा डगौराले ७९४, र डिठेटु रानाले ७९५ मत, दलित महिला सदस्यमा एमालेका राम प्यारी वि.क. ले ८१६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै हाल सम्म बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि ३ सम्मको मत गणना हुदा सम्म नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्धवार पल्लव राज भट्टले १९५२, उप मेयर चित्रा चौधरीले १९२०, काग्रेसका हरेन्द्र सिह विष्टले १५९२ खिना भण्डारीले १८६८, माओवादी केन्द्रका पोतिलाल चौरीले १३२६, राधा कडेलले ११२५ प्राप्त गरेका छन् । यस अघि वडा नम्बर १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका रतन ब. शाहीको प्यानलनै निर्वाचित भैसकेको छ, वडा नम्बर २ मा नेकपा एमालेक कलवीर चौधरीको प्यानल निर्वाचित भैसकेको छ ।
आज करिब ५ बजे देखि वडा नम्बर ५ को मत गणना कार्य जारी रहेको निर्वाचन अधिकृत गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । ताजा अपडेटका लागि हरेक पलमा बेलौरी लगायत विभिन्न स्थानिय तहको ताजा जानकारीका लागि रेडियो सुदूर संञ्चारले निर्वाचनमा नजर कार्यक्रम सञ्चालन गदै आएको छ ।